आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (९ मंसिर २०७८ बिहीबार, २५ नोभेम्बर २०२१) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (९ मंसिर २०७८ बिहीबार, २५ नोभेम्बर २०२१)
९ मंसिर २०७८, बिहीबार ००:३८
श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४२ श्री सूर्योदक्षिणायने हेमन्त ऋतु राक्षसनामक संवत्सर वि.सं. २०७८ मार्गशीर्ष ९ गते तद् अनुसार सन् २०२१ नोभेम्बर २५ तारिख बिहीबार मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष षष्ठी तिथि तिष्य नक्षत्र ब्रम्हा योग गर करण आनन्दादिमा शुभ योग चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः३४ मा र सूर्यास्त साँझ १७ः७ मा हुनेछ ।
मेष – कठोर मिहिनेतले काम बन्नेछ । अरुको भर नपरी आफ्नै बल विवेकले काम गर्नु हितकर रहला । विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त होला । फलिफाप हुनेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ । साहसिक कार्यमा रुचि बढ्ला । यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । सुख सन्तति धन यश इष्टमित्र बढ्ला । ख्याति फैलिनेछ । सुख शान्ति ऐश्वर्य बढ्ला ।
वृष – परोपकारको कर्ममा मन आकर्षित होला । नसोचेको काम बन्नेछ । आयस्रोत र सौभाग्य बढ्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त होला । शारीरिक र आर्थिक कार्यमा प्रगति होला । मान महत्व आरोग्यता बढ्नेछन् । खर्चमा नियन्त्रण आउनेछ । शुभ कार्य बन्नेछ । व्यापारमा सफलता मिल्नेछ । यात्रा हुनेछ ।
मिथुन – धननास हुने योग छ । खानामा सचेतना अपनाउनु पर्ला । झमेलाबाट बच्नुहोला । भागदौड तथा परिश्रम बढ्नेछ । ऋण, रोग र शत्रुसितको कुरामा अनुकूलता आउनेछ । नयाँ काममा सफलताको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ला ।
कर्कट – काम रोकिए पनि अप्ठ्यारोमा साथ दिने भेटिएलान् । हरेक क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । मान महत्व वृद्धि होला । रसरागको कार्यमा प्रयासरत रहनुहुनेछ । व्यवसायिक पक्षसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । साझेदारीको काममा सफलता मिल्नेछ । बल विवेकले काम बन्नेछ ।
सिंह – कार्य सफलता हुनेछ । रोकिएका काम पनि बन्नेछन् । मन हर्षित रहनेछ । लगानी बढ्नेछ । मान मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने सामर्थ्य बढ्ला । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । साहसिक कर्ममा रूचि बढ्ला । शुभ समाचार मिल्नेछ । पारिवारिक सुख शान्ति बढ्नेछ ।
कन्या – नयाँ कार्य नथाल्नुहोला । घरमा पाहुनाको आगमन हुनेछ । व्यस्तता बढ्नेछ भने साहसिक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । यात्रा होला । कुनै पनि शारीरिक र आर्थिक जोखिममा नपर्नु उचित रहला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा लाग्नु बेस हुनेछ । सन्तानको सहयोग मिल्नेछ ।
तुला – खानपानमा ध्यान दिनुपर्नेछ । धन नास होला । ब्यर्थमा समय बित्नेछ । गरेको कार्यको फल मिल्ने सम्भावना कम छ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । सुख समृद्धि मान पुरस्कार आदिमा विघ्नबाधाको डर रहला । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । अरुसित मिलेर काम गर्नु बेस रहला तर अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुने छैन ।
वृश्चिक – कार्य सफलताको योग छ । मन हर्षित रहला तर स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ । धनलाभ हुनेछ । आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । लेखनप्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । आफन्तको सहयोग र साथीभाइको साथ प्राप्त होला ।
धनु – परिवारजनको चाहना पूरा गर्न सकिनेछ । परोपकारमा मन रमाउनेछ । सामाजिक एवम् धार्मिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । उन्नति हुनेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । शैक्षिक र बौद्धिक काम बन्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । धन मान महत्व बढ्ला । रसराग गीतसंगीतमा आकर्षण बढ्नेछ । सन्ततिसुख बढ्नेछ ।
मकर – खर्च र लगानी बढ्ला । धोखा हुने ठगिने सम्भावना रहनेछ । सोचीविचारी काम गर्नु अनुकुल रहनेछ । हांसविलासमा आकर्षण रहला । नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । ऋण रोग र शत्रुप्रति सचेत रहनुपर्नेछ । विपरीतलिंगीको सहयोग मिल्नेछ । दुःखमा साथ दिनेहरु भेटिन्छन् ।
कुम्भ – धन यश मान सुख समृद्धि बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । विश्वास गरेकाले धोका दिन सक्नेछन् । मनमा दुविधा रहे पनि सामाजिक कार्यमा रुचि जानेछ ।